Xeedho MagSafe ayaa ku laaban kara Macs | Waxaan ka socdaa mac
Laga soo bilaabo 2006 ilaa 2016, Apple waxay adeegsanaysay xeedhokan muddo toban sano ah, taas oo ugu yaraan aniga ila muuqatay inay ahayd ikhtiraac dhab ah. Xeedho waxaa loo adeegsaday MacBook, MacBook Pro iyo MacBook Air, ilaa la go'aansaday in la bilaabo u gudubka xeedho USB-C. Sannadkan iyada oo la adeegsanayo iPhone 12, Apple waxa ay taleefanka kala soo baxday xeedho awgood taas, si fiican ayaan u dhihi karnaa waa isku day in la helo xeedho bilaa wireless ah. Xanta cusubi waxay tilmaamaysaa taas waxay u badan tahay inaynu mar kale u adeegsan doonno xeedho Macs ah.
Bixiyaha MagSafe wuxuu ku soo laabtay nolosheena mahadsanid - iPhone 12, laakiin warbixinno cusub oo ka imanaya Bloomberg, muujiyaan inay u badan tahay inaan aragno Xeedho Magsafe loogu talagalay Macs inuu horeyba ugu isticmaalay 2006 ilaa 2016 moodooyinka kala duwan ee kumbuyuutaradiisa. Sida laga soo xigtay isla warbixinahaas, isku xirahu wuxuu la mid noqonayaa qaabeynta asalka ah ee MagSafe "oo ah qaabka kiniiniga dheereeya". Si kastaba ha noqotee waxay bixin doontaa lacag dhakhso ah oo loogu talagalay MacBook.
Laga soo bilaabo 2016, fiilooyinka MacBook-ga ayaa ah nooca USB-C oo lagu daro kuleylka batteriga waxaa loo isticmaalaa in lagu wareejiyo xogta iyo wax soo saarka fiidiyowga, aamiin inuu ka yar yahay MagSafe iyo wixii ka sarreeya oo dhan waa mid guud. Taasi waa mid marwalba la mahadiyo. Jaamacadaha ku shaqeeya xeedhooyinka waa inay ahaadaan kuwo qasab ah. Laakiin haye, taasi waa arrin kale. Laakiin dabcan yaa seegi waaya kuwa Magsafe magnet ka dhigaya fududeeynta Mac-da iyo in haddii aad xarig ka jarto aad ogtahay inaysan jirin wax khatar ah oo Mac ah oo dhici karta.
Hadda, istaandarka USB-C ma baxayo. Sida laga soo xigtay warbixinta "In kasta oo uu ka tagayo USB-C lacag bixinta, Apple wuxuu sii wadi doonaa inuu ku daro dekedo badan oo USB-C ah oo ku saabsan mustaqbalkiisa Macs." Taasi waa muhiim maxaa yeelay dekedaha degdegga ah ee sidan oo kale ayaa muhiim u ah gudbinta xogta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Xeedho MagSafe ayaa ku laaban kara Macs